साउने सिर्जनाको ग्ल्यामर – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
साउने सिर्जनाको ग्ल्यामर
२०७१ श्रावण ३, शनिबार ०४:१६ गते
‘खसे पनि बादलझैँ
हुन पाए हुने
छुन पाए हुने
यो बर्खाले कतिकति
धुन पाए हुने ।’
कवि प्रकाश सायमीको यस गजलमा फोहोर बगाउने साउनको वर्षाले जिन्दगीलाई धुन पाउने कल्पना गरिएको छ । साउन वर्षा ऋतुको दोस्रो महिना । जतिखेर पनि झरी परिरहने यो मौसममा कवि सायमीको बादल बनेर जमिनलाई छुने सपना छ । छिनछिनमा दरर्र दर्किने साउनको पानीसरी यतिबेला साहित्यकारहरुको पनि सिर्जनाका ग्ल्यामरहरु बेसरी नै दर्किएका छन् । साउने झरीमा सिर्जनाको बाढी नै आएको छ ।
एकान्त यो रातमा
मलाई पागल बनाउने गरी
जब हुन्छिन् मेरी
मायालु मेरो वरिपरि ।’
बेस्सरी झरी परेको देखेपछि डा. अरूण सायमीले यो गीतको रचना गरे । शम्भुजीत बास्कोटाले संगीत भरे र नवीन के. भट्टराईले गाए । गीतको भावमा मायालु वरिपरि आउँदा झरी तिमी बल्ल पर्ने छौ भनिएको छ । झरीलाई मायालुको पलसँग तुलना गरिएको छ । मायालु र झरीको नाता देखाइएको छ गीतमा ।
झरीको समयमा मायालुसँग लुटपुटिएर माया गाँस्दाको क्षण बेग्लै हुन्छ । सुखानुभूति र आनन्दको अनुभूति हुन्छ । यही सोचेर होला डा. सायमीले ग्ल्यामर भरिएको सिर्जना गरेका । गीतमा मायालु नजिकिँदा झरीलाई साथ दिन भनिएको छ ।
कहिले घाम, कहिले पानी यो प्रकृतिको नियम हो । यो साउनमा प्राकृतिक सौन्दर्यको चित्रण गर्दा पानीको खूब प्रसङ्ग आउँछ । पानीका अनेक रुप हुन्छन् । त्यही रुपमा साहित्यका पारखीहरुले ग्ल्यामर भरेर सिर्जना गर्छन् । त्यसैले त साउने झरी गीत बन्छन्, गजल बन्छन्, कविता बन्छन् र निबन्ध बन्छन् ।
‘यतिबेलाको मौसम ग्ल्यामरस प्रकारको सिर्जना गर्ने मौसम हो । यो मौसममा साहित्यकारहरुको सिर्जना बढी फुरेका हुन्छन् । साउने पानीमा बिम्ब र प्रतीकहरुको मिलन बढी हुन्छ । त्यसैले त, सिर्जना पनि बढी ग्ल्यामरकै हुन्छन्’, गजलकार पुष्प अधिकारी ‘अञ्जलि’ ले भने, ‘साहित्यमा पनि ग्ल्यामरस दर्शाउने अनेक रुप हुन्छन् ।’
‘झरी बादल बर्षाद् थियो
हामीसँग छाता थिएन
त्यस्तो कुनै साता थिएन
कति आए तलाकपत्र
माया दिने जीवन दिने
पुष्पको कुनै दाता थिएन ।’
झरी, बादल, बर्षाद् भएको समयमा गजलकारसँग कुनै छाता थिएन । संयोगले उनीसँग भेट भइरहन्थ्यो । उनीसँग नभेटेको त्यस्तो कुनै साता थिएन । झरी परिरहेको समयमा उनको भेट नै मह¤व बन्यो यहाँ । गजलकार अञ्जलि भन्छन्, ‘पानीको रूझाइसँगै साहित्यमा पनि ग्ल्यामर झल्कन्छ । रूझेका युवतीहरु सिर्जनाका बिम्ब र प्रतीकहरु बन्छन् ।’
‘पानीको रिमझिम बर्षाद्को बेला
धीत मारेर किन रूझेकी
हिस्सी परेको मुहार तिम्रो
लाजले व्यर्थै किन छोपेकी ।’
गीतकार गगन विरहीका यी सुन्दर शब्दहरुलाई राम थापाले संगीत र गायक प्रकाश श्रेष्ठले मखमली स्वर दिएका छन् । झरीमा अरुभन्दा युवतीको रूझाइ ग्ल्यामरस हुन्छ । त्यसैले, अधिकांश सर्जकले युवतीलाई बिम्ब बनाएर साहित्य सिर्जना गरेका हुन्छन् । पानीमा रूझेकी मायालुले लाज मानेर मुख छोप्दा जोकोही पे्रमी भुतुक्कै हुन्छन् नि !
झरीमा चाहेर होस् वा नचाहेर, भिज्नेहरुको मनलाई ग्ल्यामरस सिर्जनाले लठ्ठ बनाउँछ अनि प्रेमीहरु स्वरसम्राट् नारायणगोपालको गीतले भनेजसरी बोलाउँछन्, मायालुलाई ।
‘साउनको झरी बनी तिमी आऊ न
मेरो मनको अँधेरीमा जून छाऊ न ।’
‘झरीमा साहित्य सिर्जना बढी नै हुन्छन् । पानीको मौसमले साहित्य सिर्जना गराउँछ । पानीको बिम्बलाई समातेर गरिएका सिर्जनाले पाठकको ध्यान खिच्छ र त्यस्ता सिर्जनाहरु बढी हिट हुन्छन्’, हाम्रो मझेरी साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्प अधिकारी अञ्जलिले भने ।
‘म बिर्सू कसरी ?
त्यो पानीमा आगो बलेको रात
आकाशकी परी धर्तीमा झरी
मसँग जिस्केको त्यो रात
जेवी रूमाल र जिन्दगी
एकैसाथ निचोरेको रात ।’
‘झरी, पछ्यौरी र जेवी रूमाल’ शीर्षकको केविएसले लेखेको यो कविताले झरीलाई यौनसँग जोडेको छ । झरीलाई यौनसँग जोडेर पनि थुप्रै सिर्जनाहरु भएका छन् । त्यसैले, झरीको साहित्यसँग मात्र होइन, यौनसँग पनि सम्बन्ध छ । साउने झरीसँगै आकाशबाट एउटी परी झरी र रातभर जिस्केर बसी । यस्तो क्षण कहाँ भुल्न सकिन्छ र !
भनिन्छ, साउने झरीमा नफुरेका सिर्जनाहरु अघि–पछि कहाँ फुर्छ र ! सर्जकहरु यतिबेला पाइलैपिच्छे कविता फुराउँछन् । सिर्जना नगर्नेहरु पनि यतिबेला सिर्जनाका मूलहरु फुटाउँछन् । यो मौसममा सर्जकहरु कल्पनाको झरीमा डुबुल्की मारेका हुन्छन् । सुन्ने या पढ्नेहरुलाई पनि झरीका सिर्जनाले काउकुती नै लगाएका हुन्छन् ।
‘झरीले निथु्रक्क भिजेको बेला
तिमी भए कस्तो हुन्थ्यो
शरीर सबै रूझेको बेला
तिमी भए कस्तो हुन्थ्यो ।’
वा…वा… शरीर रूझ्दाको क्षणको त बयान गर्न नै सकिँदैन । अझ युवती रूझ्दा झल्कने ग्ल्यामर त सर्जकका लागि राम्रो मसला बन्छ । शरीरमा ल्याप्पै टाँसिने पातलो कपडामा निथ्रुक्क भिज्दाको युवतीको जिरो फिगरले पे्रमीहरुको मनलाई त पागलै बनाउँछ नि ! सर्जकहरु त्यही युवतीको जिरो फिगरलाई र प्रेमीको पागल मनलाई जोडेर मीठो साहित्य सिर्जना गरिदिन्छन् ।
युवतीको मन तान्ने सुरसार कसेका प्रेमीहरु त्यही सर्जकको सिर्जना सुनाएर मख्ख पार्छन् । प्रेमीहरु भनिहाल्छन,
गर्दैन जिन्दगानीमा ।’
यस्तो प्रेमीको गीत सुनेपछि युवतीहरुलाई के चाहियो र ! पूरा विश्वास गरी झरीसँगै मायालु पल बिताउन थाल्छन् । त्यही क्षणको सिर्जना नै सर्जक र पाठकका लागि ग्ल्यामरस सिर्जना बन्छ ।
‘साउन महिना साहित्यको सिजन हो, यतिबेलाका सिर्जना नै ग्ल्यामरस बन्छन् । युवक र युवतीबीचको प्रेमसम्बन्ध यस्तै मौसममा बढी आउँछन् । झरीलाई लभ सिजनमा मात्र होइन, जीवनका अनेक बिम्बहरुसँग जोडेर रचनाहरु हुने गरेका छन्, कवि एवं निबन्धकार सङ्गीत आयामले भने, ‘साहित्यको अर्को मुलायम रुपजस्तै बनेको छ झरी र माया ।’ कवि आयामले आफ्नो यस गजलमा भनेजस्तै साउनको मौसम नै जीवनलाई मद्होस बनाउने प्रकारको हुन्छ ः
यात्रा थियो एकान्तमा
टाढा कुनै बास थियो
कुरा भने खास थियो
लय टिप्दै मनसुनको
दिन ढल्दै गए पनि
गन्तव्यको आश थियो ।।
‘साउने खोला उर्लेर आउँदा
माछी मार्नु दुवाली छेकेर’
साउने खोलाजसरी माया उर्लेर आउँदा प्रेमीहरु दुवाली छेक्न तयार नहुने त कुरै भएन । दुवाली छेक्नेहरुको लाइनै हुन्छ यतिबेला । मायालुलाई दुवाली छेक्दा जालमा पर्ने आशा पनि हुन्छ नि । प्रेमीको त्यही आशालाई बाँधिदिन्छ, सर्जकको सिर्जनाले ।
रातो गुलाब फुलेजस्तो
आजकलका झरी पनि
जिस्किएर चुम्छु भन्छे
मैले चुम्न खोज्दा भने
छातामा अल्झिदिन्छे ।’
झरीका यस्ता कालजयी सिर्जनाहरुले पाठकको मन सजिलै तानेको छ । पानीको अनेकन रुप समेटिएको यस्ता सिर्जनाहरु हरेक कन्दराहरुमा गुन्जिएका छन् । झरी थामिएको छैन । बस्तीहरु रूझेका छन् । सर्जकहरु भिजेका छन्, साहित्यिक झरीहरुमा । अनि, न्यानो साहित्यिक काखमा निदाएका छन्, स्रष्टाहरु ।
‘झरी परेको यो रातमा
मद्होसी यो मातमा
म निदाउँछु फेरि तिम्रो
यो न्यानो काखमा ।’